बझाङ जिल्ला अस्पतालमा ग्यास्ट्रिक भयो भन्दै आएकी युवतीको पेटमा बच्चा देखिएपछि…. – News543Online
बझाङ जिल्ला अस्पतालमा ग्यास्ट्रिक भयो भन्दै आएकी युवतीको पेटमा बच्चा देखिएपछि….
April 26, 2021 adminLeaveaComment on बझाङ जिल्ला अस्पतालमा ग्यास्ट्रिक भयो भन्दै आएकी युवतीको पेटमा बच्चा देखिएपछि….
चैत्र महिनाको १३ गते जिल्ला अस्पतालमा एक किशोरी पेट दुख्ने समस्या लिएर ओपीडीमा पुगिन् । उनलाई चेक चाँज गर्दा उनको पेटमा ४ महिनाको बच्चा देखियो ।
स्वास्थ्यकर्मीले तपाइको श्रीमान कता छन् भन्दा उनले विवाह नगरेको बताइन् । तर, पछि स्वास्थ्यकर्मीले पेटमा बच्चा छ भनेर जानकारी दिँदा ती किशोरी अलमलमा परिन् । लामो समयसम्म त यहाँका स्वास्थ्यकर्मीसँग हुनै सक्दैन भनेर जिद्धी गर्न थालिन् । जब भिडियो एक्सरे गरेर नै देखाइयो, त्यसपछि पेटमा बच्चा रहेको स्विकारिन् र छिमेकी गाउँको केटासँग नै असुरक्षित यौन सम्पर्क भएका कारण गर्भ रहेको बताइन् ।यस्तै चैत्र महिनाको पहिलो सातामा १६ वर्षीया एक किशोरी पेट दुख्यो र ग्यासिट्रिक भयो भन्दै जिल्लाको एक निजी मेडिकलमा पुगिन् । उनले मेडिकलबाट पेट फुलेको र आफूलाई ग्यास्ट्रिक भएको भनेपछि मेडिकल सञ्चालकले ग्यास्ट्रिककै औषधि दिएर पठाए र मेडिकल सञ्चालकले जिल्ला अस्पतालमा जान भनेपछि ती किशोरी जिल्ला अस्पतालमा पुगिन् ।
जिल्ला अस्पतालमा पनि आफूलाई ग्यास्ट्रिक नै भएको स्वास्थ्यकर्मीसँग दाबी गरिन् । स्वस्थ्यकर्मीले उनकै अघि भिडियो एक्सरे गरेर पेटमा बच्चा खेल्न लागेको देखाइदिएपछि उनी अलमलमा परिन् र गर्भमा रहेको ७ महिनाको बच्चा फालिदिन डाक्टरसँग अनुनय विनय गरिन् । तर, डाक्टरले उनलाई सम्झाँदै घर पठाए र ती किशोरीले आफूले असुरक्षित रूपमा यौन सम्पर्क गरेकै कारण गर्भ बसेको स्वीकार गर्दै सोही केटासँग विवाह गर्ने बताउँदै घर फर्किन् ।
स्रोतका अनुसार चैत्र महिनाको अन्तिमतिर १८ वर्षीया एक अविवाहित किशोरी जिल्ला अस्पतालको एमरजेन्सीमा पुगिन् । किशोरीमा रत्तश्राव भइरहेको थियो । चेकजाँच गर्दा निजी मेडिकलबाट गर्भपतन गराउने ‘ट्याब्लेट मिसोप्रोस्टल’ नामक औषधि खाएर पेटमा रहेको ४ महिनाको बच्चा खेर फालेको पत्ता लाग्यो । किशोरीले इन कम्प्लेटेड एभर्सन गराएकै कारण रत्तस्राव भएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालयमा पुगेपछि स्वास्थ्यकर्मीले मेसिन बाट सफा गरी उनको ज्यान बचाए ।
यी त सामान्य उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता केस स्रोतका अनुसार दैनिक रूपमा ५-६ वटा आइरहेका हुन्छन् । उसो त त्योभन्दा डर लाग्दो रूप इनकम्प्लेटेड एभर्सन (समय नपुग्दै गर्भपतन गराउने दर) गराउने दर निकै डर लाग्दो छ । दैनिक रूपमा अविवाहित वा विवाहित गरेर ५-६ केस जिल्ला अस्पतालमा मात्रै पुग्ने गरेका यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । सुरक्षित यौन सम्पर्कबारे राम्रोसँग ज्ञान नहुनु, निजी मेडिकलमा सहज रूपमा गर्भपतन गराउने औषधि पाइनुलगायत विभिन्न कारणले यो दर बढेको हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको अनुमान छ ।
नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ – गौरी मल्ल (भिडियो)
धनगढीका व्यवसायी जोशीको कार दुर्घटनामा मृत्यु
बैंकबाट,, पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण